Imbali Development - Xizi elevator Co., Ltd
XIZI ethwala phambili quintessence yeli binzana yophuhliso ikheshi iminyaka, amava ifa ikhulu kunye nobuchwephesha eshishini ikheshi of kweminyaka engama-30, inamathele ezintsha oluzinzileyo usoloko ligcina sengqondo ezinikeleyo, ezizodwa kunye concentrative nophuhliso lwamashishini.
Ukutyhubela iminyaka, ixesha ngalinye ukuxhawula ngokunyanisekileyo kunye umxumi, ixesha ngalinye ngentsebenziswano olusondeleyo umxumi .... bonke ubungqina kwangaphambili XIZI kaThixo. Kungokuba kanye uncumo wokwenene lonke ixesha, ngokukhawuleza XIZI bafumanise ithagethi ukunyathela eqongeni ngamazwe ukusuka kurhwebo lwasekhaya.
Etheza * ngoMhla ukusebenza lwamashishini kunye nolawulo,-izinga yokuqala zentengiso iitalente yobungcali oludibeneyo, uphando imveliso kunye nophuhliso ezinamandla iitalente kwakunye onamava nobugcisa kunye nokwakhiwa iitalente iitalente abaphezulu, iqela XIZI uqinisekile of kuzisa unkabi echanileyo kulo lonke ihlabathi.
Ngowe-2016, yaqaliswa ngempumelelo izinto ezintsha ezahlukeneyo, kuquka uhlobo idiskhi ultra-ezingcakacileyo imoto kunye Victor MRL (T) ikheshi kunye igumbi ngomatshini, XEC-6000 ulawulo-drive ezihlangeneyo ezizihambelayo ekhuselekileyo.
Ngowe-2015, XIZI Industrial Park nokukhanya kwelo gumbi kwishishini, wawongwa isihloko top-100 beshishini kwiPhondo Zhejiang.
Ngowe-1997, XIZI OTIS ikheshi Co., Ltd. yasekwa ngokusemthethweni.
Ngowe-1996, "XIZI" sibalekela No. 1 brand yesizwe inxaxheba kurhwebo lwasemakhaya.
Ngowe-1993, XIZI amazwe ukuba ikheshi lokuqala ukuya eVietnam.
Ngowe-1981, XIZI elevator yasekwa ngokusemthethweni.